Indlu yemithi epholileyo enombono wolwandle - I-Airbnb
Indlu yemithi epholileyo enombono wolwandle
Indlu ekhiwe emthini sinombuki zindwendwe onguUeli
Ngaba ujonge iholide kwindawo entle? Ukuba kunjalo, singathanda ukukumema!
Fumana ulwazi oluthe kratya malunga neendawo zethu zokuhlala kunye neendawo ezitofotofo, iinkonzo esizinikezelayo ukugqibezela iiholide zakho kwaye sizenze zibe ngamava amnandi, azele ziintlobo ngeentlobo.
Izindlu zomthi ngokwendalo zihlala ehlathini, iimitha ezi-4 ukusuka emhlabeni. Izindlu zenziwe ngamaplanga ngokupheleleyo, ngaphandle kweWC: iingcango, iifestile ezineesilathi zokhuni ezilungelelanisiweyo endaweni yeglasi, iindonga, umgangatho, ishawa kunye nesitya sokuhlamba. Uphahla lugqunywe ngePiaçava (amagqabi esundu). Apha uhlala kwindawo enomoya, enika intuthuzelo eyongezelelweyo kunye nentlalontle kwindawo yehlathi lemvula.
Izinyuko zangaphandle zikuzisa kwithafa elinetafile kunye nezitulo ezibini. Ukusuka apha, umnyango wendlu ukhokelela kwiholo encinci yokungena kunye nekhitshi. Apha ufumana umatshini wokucoca ikofu, i-oven microwave kunye nefriji encinci. Ngokuthe ngqo ecaleni kwayo kukho igumbi lokuhlambela elineshawa, indlu yangasese kunye nesitya sokuhlambela.
Ukusuka kwiholo yokungena unyuka izinyuko ezi-3 ukuya kwigumbi lokulala elinebhedi enkulu yokumkanikazi enenethi yeengcongconi kunye nefeni ye-ceilang kunye newodrophu enkulu.
Bekuya kuba yintoni "ubusuku bobuvila« ngeholide ngaphandle kweTV? Siphinde sacinga ngaloo nto. Igumbi lokulala lixhotyiswe ngescreen esisicaba seTV, esifumana iinkqubo zeTV zesizwe nezamazwe ngamazwe.
Kwindlu yemithi uhlala phezulu kakhulu phezu komhlaba. Eyona nto ilungileyo malunga neeholide kule mizi yemithi inokufikelela ukusuka kwigumbi lokulala ukuya kwi-balcony ene-hammock. Kobu buphakamo uphantse ube yinxalenye yendalo. Apha phezulu kulapho kuhlala khona iinkawu kunye neentaka zalo mmandla - kwaye ngethamsanqa elincinci iindwendwe ziya kuza kunye nazo.
Umgama ozimitha ezili-12 uhamba ngendlela ekhokelela kwincochoyi yemithi ukuya kwindawo yokujonga yabucala exhotyiswe nge-hammock, itafile kunye nezitulo ezibini. Apha ungonwabela umbono omangalisayo phezu kweAtlantiki eseMazantsi.
Indlu yomthi yakhiwe kwizibonda kwaye yindlu elula eyenziwe ngamaplanga, kodwa ibonelela ngayo yonke intuthuzelo onokuyilindela kwiholide kwi-upmarket ye-3-star cottage.
Indlu yemithi ingahlala abantu ababini. Indawo yokuhlala ifanelekile kwiholide yothando kwizibini ezitshatileyo okanye iholide ekhululekile kubahambi bodwa.
Indlu yemithi ikwindawo ye-»APA Santo Antonio« yogcino lwendalo. Ipropathi, ejikelezwe yindalo engqongileyo yehlathi elinemvula, ilele kanye ecaleni kolwandle lwaseSanto André. Oku kwachazwa ngokufanelekileyo yimagazini ye-»Veja« njengenye yeelwandle ezilishumi ezintle nezingaqhelekanga eBrazil.
Amanzi e-»Praia de Santo André« (kwakhona: »Praia de Tartarugas« – Turtle Beach) azolile enkosi kulwandle olukude nonxweme. Oku kuyenza ilungele ukuhlamba, kunye neentsapho ezinabantwana. Ukuza kuthi ga ngoku, le ngcebiso yangaphakathi kulo mmandla isahlala ingafunyanwa lukhenketho oluninzi.
Ukuza kuthi ga ngoku, kuphela ukhenketho oluzinzileyo oluphuhlisiwe kulo mmandla. Ngoku engqondweni, sithathe amanyathelo afanelekileyo. Sifudumeza amanzi ethu sisebenzisa amandla elanga kuphela. Iozone isetyenziswa endaweni yeklorine ukunyanga idama lokuqubha kunye nokucocwa kwamanzi.
Ilali ezolileyo ukuza kuthi ga ngoku ihleli iyilali yokuloba eyonwabileyo nethe cwaka enabemi abangapha kwama-800. Ukusuka kwisiphithiphithi sasePorto Seguro nayo yonke imivalo yayo yolwandle ufika usuka eSanta Cruz Cabrália ngqo kwisikhephe esingaphaya kweRio João de Tiba.
Kwiminyaka yakutshanje iSanto André resort ibaluleke kakhulu. Apha, i-ecotourism ekumgangatho ophezulu iphuhliswe ngeziseko ezingundoqo eziphawulekayo. Ukubonelela ngexesha leholide yakho kukho iivenkile ezimbini zezaphulelo ezincinci, iivenkile ezithengisa ukutya, iivenkile zokutyela, iindibano zocweyo zobugcisa kunye nezobugcisa, kunye neendawo zokutyela ezingaphezu kweshumi elinesibini, ii-pubs kunye neebhari ezilalini.
Intsomi yakudala yaseBrazil ibalisa oku kulandelayo ngoSanto André. Utata owayenexhala owayesoyika amasela wangcwaba umfanekiso oqingqiweyo wegolide kaSaint Andrew apha. Ngubani owaziyo-mhlawumbi igolide yalo mfanekiso iboleke iglosi ethile kwilali encinci yokuloba?
IPorto Seguro yasekwa ngo-1534 kwaye ngokuqhelekileyo yamkelwa njengendawo yokuzalwa yaseBrazil. ESanta Cruz Cabrália, umPhuthukezi uPedro Álvares Cabral wanyathela kumhlaba waseBrazil okokuqala ngomhla wama-22 kuAprili, 1500. IPorto Seguro ke ngoko sesinye sezona zixeko zindala eBrazil.
IPorto Seguro ifikeleleka ngokulula kwaye yindawo ethandwayo yabakhenkethi. Abatyeleli banokonwabela umbono omangalisayo wonxweme ukusuka kwidolophu ephezulu yembali,. Nabani na othanda ukuphithizela kunye nokuphithizela uya kufumana ubomi obudlamkileyo kwidolophu esezantsi. Izitrato zokuthenga zibonelela ngeendlela zokuthenga ezinomtsalane ngexesha lasemini. Rhoqo ngorhatya ngeyona ndlela yokutya iBahian kunye nezamazwe ngamazwe e-»Passarela do Descobrimento« eneebhari ezininzi kunye neendawo zokutyela.
Ukusukela ngo-1993, isikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe kwisixeko sasePorto Seguro sibe negalelo elikhulu kuhlumo loqoqosho nakukhenketho kulo mmandla welizwe. Namhlanje, iPorto Seguro sesinye sezona zixeko zityelelwa kakhulu eBrazil.
Imozulu efumileyo yetropikhi yalo mmandla yenye yezona zinto zimnandi kwihlabathi ngenxa yobushushu, imimoya efumileyo evela kuMazantsi eAtlantiki kunye nemimoya ebhudla ngamandla esuka ePatagonia.
Amaqondo obushushu angama-22°C ebusika kunye nama-26°C ehlotyeni athetha ukuba ungakonwabela ubomi baselwandle unyaka wonke.
Lo mmandla awunalo ixesha lemvula eliqinisekileyo, kodwa iinyanga zika-Agasti/Septemba kunye noJanuwari/Februwari zithathwa njengezona zome kwaye ngokuqhelekileyo kukho imvula eninzi kwinyanga kaMeyi.
Sithetha isiNgesi, isiJamani, isiPhuthukezi, isiFrentshi nesiDatshi.
Iilwimi: Nederlands, English, Français, Deutsch, Português